राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नु पर्छ: रोशन न्यौपाने
Posted: 2018-03-10 19:59:36
बैंकर्स संघले एनआइसी एसिया बैंकसँग सहकार्य नगर्ने भनेपछि एनआइसी एसिया बैंकले राष्ट बैंकले हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्न पर्ने बताएको छ । पछिल्लो समय बैंकर्स संघ र एनआइसी एसिया बैंक बीच देखिएको एक किसिमको विवादको विषयमा बैंकका असिस्टेन्स चिफ इक्सक्युटिभ अफिसर रोशन न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीके सम्पादित अंशः
नेपाल बैंकर्स संघले गरेको निर्णयलाई कसरी लिनु भएको छ ?
अहिले जुन नेपाल बैंकर्स संघले हामीलाई अप्ठ्यारो हुने हिसावले केही गरेको भन्ने जुन विषय छ, त्यसमा म पहिला के भन्न चाहान्छु भने नेपाल बैंकर्स संघ भनेको बैंकहरुको नियमनकारी निकाय होइन । बैंकिंग क्षेत्रको नियमनकारी निकाय भनेको नेपाल राष्ट बैंक हो । नेपाल बैंकर्स संघले बैंकहरुको हकहितको संरक्षणको लागि पहल गर्ने हो । बैंकर्स संघ निर्देशन दिने अधिकार प्राप्त निकाय होइन । नेपालमा नेपाल राष्ट बैंक स्वयमले ब्याजदरलाई, बजारलाई सौपिसकेको आवस्था छ । बजारमा माग र आपुर्तिको आवस्था अनुसार व्यावदर निर्धारण हुने हो । माग बढ्दाखेरी व्याजदर अलिकित माथि जाने र व्याज घट्दाखेरी व्याजदर अलिकति तल आउने बजारको सर्वमान्य सिद्दान्त हो । सबैले स्वकिार गर्दै आएको चाँहि बजारको परीपार्टी हो । अब त्यस्तोमा डिपोजिटको समस्या बैंकिंग क्षेत्रमा बढ्दै जाँदा खेरी हामीले अलिकति बढी व्याजदर दिएर सर्व साधारणको हकहित हुने गरेर अगाडी बढ्छौं भन्ने हिसावले जाँदाखेरी त्यसलाई छेक बार लगाउनु खोजिएको छ । त्यो भनेको प्रतिस्पर्धालाई सिमीत गर्न खोज्नु हो । र प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर सिण्डीकेटलाई बाढावा दिने र कार्टेलिंगलाई बढावा दिने कामले कसैको पनि हित हुँदैन । र मेरो चाँहि धारणा के छ भने नेपाल राष्ट बैंक जस्तो सेन्सिबल तथा रिस्पोन्सिबल रेगुलेटर निकायले बजारमा यस्तो प्रकारको गतिविधि हुँदाखेरी यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि उपयुक्त पहल कदमी यथासिघ्र लिन जरुरी छ । ताकि खुल्लेआम गलत अभ्यासहरु हुनु नसकुन् । अहिले पनि ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनसँख्या बैंकिंग नेट भन्दा बाहिर छ । अहिले पनि मान्छेहरु २४ प्रतिशतमा ३६ प्रतिशतमा साहुमहाजनसँग ऋण लिन बाध्य छन् । कतिले त्यो पनि पाएका छैनन् । त्यस्तो आवस्थामा बैंकिग पहुँच भन्दा बाहिर रहेका ६० प्रतिशत जनसँख्या लाई बैंकिंग पहुँचमा कसरी लिएर आउने भन्ने प्रमुख चुनौतीको विषय रहँदै आएकोमा त्यतातिर हामी ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्नेमा हामी चाँहि अन्यत्र मोडिनु र नाफा बढाउने धुनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमीत गर्ने भन्ने हदसम्म जानु भनेको धेरै दूर्भाग्यपूर्ण आवस्था हो । यो विषयमा समयमा नै राष्ट बैंकले हस्तक्षेप गर्न वाञ्छनिय छ ।
यो विषयमा राष्ट बैंकसँग तपाईहरुको कुरा भयो होला ? के छ राष्ट बैंकको प्रतिक्रिया ?
हामीले राष्ट बैंक सँग कुरा गरिराखेका छौं ।अब राष्ट बैंकले सबै परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । र उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने छ । हामीसँग १ सय २४ अर्ब सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको छ । यो बैंक भनेको शेयर होल्डरहरुको बैंक होइन । सर्व साधारण सबैको निक्षेप भएको आधारमा हामीले लगानी गरेर सर्व साधारणको निक्षेप सुरक्षा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । त्यस्तोमा कुनै एउटा बैंकलाई टार्गेट गरेर उसलाई अल्लग्याउने , एक्ल्याउने खालको गतिविधिले नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई सहयोग पुग्दैन । र त्यो चाँहि गैर कानुनी विषय हो । निन्दनिय विषय हो ।
बैंकर्स संघले २८ वटा बैंकहरुबीच जुन एउटा छुट्टै सहमति भएको थियो, त्यो पालना भएन भन्ने आरोप लगाएको छ, वास्तविकता के हो ?
हामीले त्यो सहमति कल्यिै पनि गरेका थिएनौं कसैसँग
पनि कुनै किसिमको सहमति भएको छैन । त्यसमा हाम्रो सिण्डीकेटमा कार्टेलिंगमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन । थिएन र हुँदैन पनि । यदि त्यस्तो केही गर्नु पर्ने परिस्थिति आएमा नेपाल राष्ट बैंक स्वयंमले गरिहाल्छ नि । नियमनकारी निकाय भनेको त राष्ट बैंक हो ।
अबै अहिले २७ वटा बैंकहरुको भेलाले तपाईहरुसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ, तपाईहरुले अब एक्लै अगाडी बढ्नु सक्नु हुन्छ ?
हामी जनतासँगै अगाडी बढ्छौं । हामीलाई अहिले जे पनि गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ, त्यसले कुनै पनि प्रभाव पर्दैन । हाम्रा गतिविधिहरु यथावत् सञ्चालनमा रहने छन् । जनताको हितमा हुने गरेर जनतालाई सर्वेपरि मानेर हामी अगाडी बढ्छौं र निरन्तर जनताको सेवामा लागि पर्ने प्रण गर्द छुँ ।
अरु सबै बैंक एकातिर, एनआइसी एसिया एक्लै एकातिर भयो भने, काम गर्न कत्तिको सहज हुन्छ ?
हामीलाई चाँहि अरु बैंक भन्दा पनि जनताबाटै चाहिने हुन्छ । मुख्य कुरा भनेको हाम्रो गतिविधिले जनतालाई राम्रो भयो कि भएन भन्ने नै हुन्छ । सर्वसाधारणलाई राम्रो भयो कि भएन, अर्थतन्त्रलाई राम्रो भयो कि भएन, नेपालको कुनै कानुन विपरित हामीले केही गर्यौं कि गरेनौं, राष्ट बैंकको नीति विपरित केही गर्यौं कि गरेनौं भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । त्यसमा हामी पुर्ण रुपले कम्प्लाइण्ड छौं । हामीले नेपालको कानुन नेपाल राष्ट बैंकबाट जारी भएका परिपत्रहरु निर्देशनहरुको पूर्णरुपमा पालना गरेका छौं । त्यही भएर राष्ट बैंकको हामीसाग कुनै पनि प्रकारको रिजर्भेसन छैन पनि । र हामी चाँहि ग्रामीण भेगमा र सहरउन्मुख इलाकाहरुमा जे नसरी अगाडी बढिराखेका छौं त्यसले बैंकिग पहुँचमा नभएका धेरै लाई बैंकिग पहुँचमा लिएर आउनुलाई धेरै ठुला योगदान पुर्याएको छ । हामीले अहिले बचतमा नै १० प्रतिशतसम्म व्याज दिने भनेर जुन भनेका छौं, त्यसले बचतलाई प्रात्साहित गरेको छ ।
जुन यो बैंकर्स संघले निर्णय गरेको छ, यसको पछाडी तपाईहरुले बढि व्याजदर दिएको मात्रै कारण हो कि ? अरु कुनै कारण लुकेको छ ?
अहिले देखिएको चाँहि व्याजदर बढी दिएको भन्ने देखिएको हो । अब जस्तो हिसावले हाम्रो प्रगति भइराखेको छ, जसरी हाम्रो वृद्धि भइराखेको छ, त्यो कसैलाई चित्त नबुझेको पनि हुन सक्छ ।
अरु सबै बैंकहरुले एउटा नीति लिएको आवस्थामा तपाईहरुको व्याजदर बढाउने नीति किन ?
यो बजारको आवस्था चाँहि जस्तो भयो, त्यस्तै आवस्था अनुसार बैंकहरुले रणनीति लिएर जानु पर्ने हुन्छ । मेरो मुनाफा चाँहि कुनै पनि हालतमा कम नहोस् , सर्व साधारणको हित जस्तो सुकै होस् भन्ने प्रकारको सोच, बैंक जस्तो जनताप्रति उत्तर दायित्व हुनु पर्ने संस्थाले राखेर जानु हुँदैन । त्यही अनुसार हामीले जनतालाई बजारको आवस्था अनुसार अधिकतम लाभ दिएर जानु पर्छ र अप्ठ्यारो आवस्थामा मुनाफा कम भएपनि फरक पर्दैन भन्ने हिसावले अगाडी बढेको हो ।
एनआइसी एसिया र बैंकर्स संघ बीच एक खालको विवाद जस्तै देखियो, यसको सामाधान चाँहि के हुन्छ ?
यो कुरा समय सँगसँगै मथ्थर भएर जान्छ । सबैमा संयम आउनु जरुरी छ । सबैले जनताप्रति उत्तरदायि हुनु जरुरी छ । र उपयुक्त समयमा नेपाल राष्ट बैंकले उपयुक्त हस्तक्षेप पक्कै गर्ने छ ।
बैंकर्स संघको एनआइसी एसियासँग सहकार्य नगर्ने भन्ने भनाईले आम सर्वसाधारणमा नाकारात्मक सन्देश जान्छ, यसलाई कसरी चिर्नु हुन्छ ?
अहिले जुन भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो मेरो विचारमा धेरै जसोले यो कुरा बुझैकै हुनु पर्छ । उत्तरदायि सञ्चारमाध्यमले पनि यो भ्रम चिर्नको लागि र जनतालाई सूसुचित गर्नको लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । र त्यो खेलि पनि राख्नु भएको छ । जनतालई म्रममा नपर्न हुन म आग्रह गर्न चाहान्छु ।
एकातिर यो विवाद जस्तो छँदै छ, फेरि भर्खर्र मात्रै प्रमुख कार्यकारीले राजिनमा दिएको पनि बजारमा हल्ला छ, यो दुइटाको बीचमा केही सम्बन्ध छ ?
यो अन्तर सम्बन्धित विषय होइनन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीको कार्यकाककल सकिँदै थियो । त्यही भएर कार्यकाल सकिनु भन्दा केही समय अगाडी देखि उहाँ विदामा बस्ने परिपाटी अनुसार चाँहि अहिले विदामा हुनुहुन्छ । यो कतिपनि अन्तरसम्बन्धित विषय होइन ।
अहिले एनआइसी एसिया बैंकको वित्तिय आवस्था कस्तो छ ? यो विवादले कस्तो असर पार्छ ?
हामी सबै किसिमका वित्तीय परिसुचकहरुमा एकदमै सवल र सुदृढ बैंकको रुपमा रहिआएक छौं । हाम्रा १ सय ८० भन्दा बढी शाखाहरु र रहेका छन् । शाखा सन्जाल र कुल फुडप्रिन्टको हिसावले हामी नेपालकै नम्बर एक बैंक हौं । ग्राहक सँख्याका हिसावले नेपालकै अग्रणी बैंकहरुमा हामी रहन्छौं । र अग्रपंक्तिमा आउछौं । अहिले हाम्रो रणनीति भनेको सेवा केन्द्रित हुने र आम जनमानसको चाँहि मन जित्ने भएको हुनाले हामीले नाफालाई भन्दा पनि सेवालाई प्राथमिकता दिएर अगाडी बढिराखेका छौं । त्यही भएर हामीले अरुले भन्दा कम मार्जिनमा काम गर्छौं । डिपोजिटरलाई पनि अधिकतम प्रतिफल दिने र कर्जामा पनि सकेसम्म कम व्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छौं । यसले समग्रमा हाम्रो वृद्धि औषत भन्दा धेरै नै राम्रो आवस्थामा छ । हामी धेरै नै सबल र सुदृढ संस्थाको रुपमा स्थापित भएका छौं ।
एउटा सामान्य गा्रहकले किन एनआइसी एसिया बैंक मात्रै रोज्ने ?
एनआइसी एसिया बैंकको जुन सेवाको गुणस्तर छ, त्यो चाँहि हाम्रो विचारमा अरुहरुको तुलनामा धेरै नै उच्च कोटीको छ । र एनआइसी एसिया बैंकले आफ्नो मुनाफा केही कम राखेर भएपनि आम ग्राहकवर्गको हितलाई मध्यनजर गर्दै सरल र सुलभ हिसावले आफ्नो सम्पुर्ण बैंकिंग सेवा र सुविधारहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले मलाई लाग्दछ, यो बैंक अरु बैंकहरु भन्दा धेरै अर्थमा पृथक छ । र आम सर्व साधारणको बैंक हुन सकेको छ । र सबैको मनमस्तिष्कमा बस्न सफल भइसकेको छ ।
अहिले आक्रामक रुपमा शाखा विस्तारमा लागिरहनु भएको छ, यसको मुख्य उद्येश्य के हो ?
हामी के मान्दछौं भने, एउटा राम्रो कर्पोरेट सिटिजन भइसकेपछि हाम्रो समाजप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ । नेपालमा बैंक स्थापना भएको यत्रो धेरै वर्ष भइसक पनि अझसम्म पनि ६० प्रतिशत जनसँख्या बैंकिग पहुँच भन्दा बारि हुनु भनेको हाम्रो लागि धेरै नै लज्जाको विषय हो । र त्यसमा हामीले हाम्रो तर्फबाट टेवा पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्येश्यले हामीले देशका दूरदरजामा अरु बैंकहरु जान हिच्किचाई राखेको स्थानहरुमा पनि शाखा सन्जालमा व्यापक वृद्धि गरेर सेवा मुखि बैंकको पहिचान बनाउन प्रयास गरिराखेका छौं र हामी त्यसमा धेरै हदसम्म फिल पनि भइराखेका छौं भन्ने हामलाई लाग्द छ ।
तपाईहरुको भावि योजना के छ ?
हामीले पाँच वर्षे दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरेका थियौं । त्यही अनुरुप हामी अगाडी बढिरहेका छौं । सबै सूचकहरुमा नेपालको एक नम्बरको बैंक हुने हाम्रो लक्ष्य हो । हालसम्मको उपलब्धि सोही लक्ष्य अनुरुप नै हासिल भइरहेको आवस्था छ ।
एक नम्बरको बैंक बन्ने सम्भावना छ र ?
अहिले जे जस्तो हिसावले हामी अगाडी बढिरहेका छौं र जस्तो स्नेह आम जनमानसबाट पाइरहेका छौं त्यो आधारमा हेर्दा खेरी हामी पक्कै पनि एक नम्बरको बैंक बन्ने छौं । र यो मुललुकको नै आवश्यकता हो । गा्रहकमुखी बैंक हुनु र गा्रहकप्रति, आम सर्वसाधारण प्रति उत्तरदायी बैंक हुनु अहिलेको हाम्रो टड्कारो आवश्यकताको विषय भएको हुनाले हामी त्यसका लागि खरो उत्रिने छौं । र एक नम्बरको बैंक भएर छोड्ने छौं ।
अहिलेको विवादले तपाईका एक नम्बर बैंक हुने लक्ष्यमा कस्तो असर पर्छ ?
हामीले जे निर्णय गरेका छौं, सोच विचार पुर्याएर गरेका छौं । परिपक्क हिसावले गरेका छौं । मुलुकको आवश्यकता, अर्थतन्त्रको आवश्यता, आम गा्रहक वर्गको हित र बैंकको आवश्यकतालाई मध्येनजर गरेर गरेका छौं । यो बैंक भनेको कोही एक दुई जना व्यक्ति अथ्वा दुई चार जना व्यक्ति, हजार जना व्यक्तिको होइन, यो चाँहि १० लाख गा्रहकहरको संस्था हो । यो वैंकको हितसँग १० लाख गा्रहकहरुको हित जोडिएको छ । त्यही भएर यो विषयमा हामी संवेदनसिल भएर अगाडी बढ्नु पर्छ । उत्तरदायी भएर अगाडी बढ्नु पर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्द छ ।
अन्त्यमा केही भन्नै पर्ने ?
खासै केही छैन । अहिले जे जस्तो प्रकारका गतिविधिहरु अस्वभाविक रुपमा भइराखेका छन्, यसमा नेपाल राष्ट बैंकले यथासिघ्र हस्तक्षेपकारी पाइला चालेर बजारलाई नियन्त्रणमा लिन उपयुक्त हुन्छ । गलत क्रियाकलापहरुलाई निरुत्साहित गर्न उपयुक्त हुन्छ र नेपाल राष्ट बैंकले चाँडै नै आवश्यक कदम चाल्ने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।